Ihe ohuru iji luso Coronavirus na Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIhe ohuru iji luso Coronavirus na Ankara
21 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Ihe ohuru iji luso ọgụ coronavirus na nkata
Obodo Ankara na-aga n'ihu na-alụ ọgụ na Isi Obodo site na ịme ihe ọhụụ megide ọrịa coronavirus. Ezie na actorylọ Ọrụ Nnukwu achịcha Halk na-eme ka ịdị ọcha dị ọcha na ọnụ ahịa ndị ahịa, ọkachasị na mpaghara mmepụta, ọ na-ebugharị usoro mmịcha ahụ n'ụgbọ njem ọha na eze, ụgbọ njem ọha, ụgbọ njem ọha, taxi na obere obere, na ụgbọala C Plate. Onye isi obodo Ankara Mịnịsta Mansur Yavaş mara ọkwa na Mgbakọ obodo ga-arụkọ ọrụ na ndị otu na-abụghị nke gọọmentị ikesara ụmụ anụmanụ nọ n'okporo ụzọ nri iji gboo mkpa nri na-ebelata n'ihi mmechi nke cafes na ụlọ nri.
Obodo Ankara na - aga n'ihu na - eme ihe 7/24 n'ime oke nke ịlụso ọrịa na-efe efe ọgụ n'isi obodo niile.
N'ihi ntiwapụ nke Coronavirus, ngalaba niile dị n'okpuru nhazi nke Managementlọ Ọrụ Na - ahụ Maka Nsogbu na - ebuli ọrụ ọcha ọcha ma mejuputa usoro na usoro ọhụụ.
MAKA ỌGW TOGW TO CANB FRR FR FRM FRTA
Onye isi obodo Ankara Obodo Mansur Yavaş mara ọkwa na ha malitere ikesa nri na mmekorita ya na ndị otu na-abụghị nke gọọmentị Metropolitan na imekọ ọnụ na kọfị na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ndị na-egbo mkpa nri ụmụ anụmanụ n'okporo ámá.
Onye na-ahụ maka anụ ọkụkụ nke Ankara Metropolitan na Zoo Branch Mustafa Şener, ndị kwuru na ha laghachiri na nkpokọta, ebe a na-echekwa ụmụ amaala na-alọta ụlọ n'ogige Gölbaşı ebe ha na-akwado ụmụ anụmanụ ndị ahụ mepere emepe na Gölbaşı Chebe nke Obodo, nyere ozi ndị a banyere ihe ndị e mere:
“E hiwere oche esemokwu n'okpuru oche nke ọchịchị Ankara anyị. N'ikwekọ na arịrịọ nke Governorlọ Ọrụ Gọvanọ anyị, anyị wetara anụ ụlọ iri na isii dịpụrụ adịpụ na mpaghara iche anụ ụlọ yana etiti Gölbaşı yana n'ime ihe ọmụma nke ndị ọrụ afọ ofufo anyị, iji zere nsogbu ahụike ọ bụla, karịsịa nri na-edozi ahụ, ebe ndị ọrụ afọ ofufo anyị enweghị ike ịbanye na mpụga. Ndi dibia anyi n’enyocha nleba anya ahu ike na mgbe umu anumanu rutere. A na-etinye isii n'ime anụmanụ ọ bụla dị mpako iri na isii. Anyị kpọtụrụ ndị ọrụ afọ ofufo ahụ na-elele ụmụ anụmanụ nọ n'ógbè ahụ. Ndị ọrụ afọ ofufo anyị nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla iji nye ụmụ anụmanụ nri n'ụlọ ebe a na-elekọta ndị agadi iji nweta ozi gbasara ọnọdụ ahụike ha. Mgbe ewepụchara anụ ọhịa, a ga-akpọghachi ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na gburugburu ebe esiri ha. Ndị hụrụ anụmanụ anyị n’anya ekwesịghị ichegbu maka nke a, ụmụ anụmanụ anyị nọ na ahụike ma enweghị nsogbu na inye nri ha. Anyị malitekwara ikesara ndị mmadụ ihe oriri. ”
Okike Mahadum Ankara Hacı Bayram Veli na Onye Nchebe Anụmanụ na-ahụ maka Damla Karaboya kwuru, “Followinggbaso nkwupụta nke mpaghara mpaghara, a na-ebufere anụmanụ ndị ahụ anyị na-ebi na ndo Gölbaşı. Na mbido, anyị bịaruru nso n'ụzọ na-achọghị nhịan, mana ugbu a anyị nwere ike ịhụ ndị enyi anyị na Gölbaşı anụmanụ. Nsogbu adighi. N’agbanyeghi na aro ha dị ezigbo mma ma ahụike ha dịkwa mma, ”Volunte Y animalcel hụrụ ụmụ anụmanụ na-akwado ọrụ afọ ofufo kwuru,“ Abatawo m n'ụlọ a ruo ọtụtụ afọ. N'ime ụlọ a, ndụ na nri nke mkpụrụ obi na-adị oge niile. A na-agbanwe mmiri ọicesụ regularlyụ ya mgbe niile. A na-eme ọgwụ mgbochi mgbe niile, a na-eme usoro ịgba ya ozugbo. Mgbe onye isi obodo ukwu anyị Mansur Yavaş weghaara ọnọdụ, ọnọdụ ahụ ka mma. Ndị na-ahụghị ebe a na-ekwu okwu dị iche iche. Mkpụrụ obi anyị enweghị nchebe ebe a. Ndụ anyị dị ezigbo mma ebe a. Onweghi onye choro iche. ”O kwuputara echiche ya.
AHA EGO LEVEL HYGIENE kacha mma
Actorylọ ọrụ Ankara Halk Bịa amụbaala anya megide coronavirus na ụlọ ahịa ebe a na-emepụta achịcha na ebe a na-eme achịcha, ọkachasị na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa, achịcha achịcha Halk na akpa.
Actorylọ ọrụ achịcha Halk, nke mepụtara Atụmatụ Mpụga Ọsọ Mgbasa Ọsọ, malitere tụọ ahụ ọkụ site na ahụ ọkụ kwa ụbọchị kwa oge na iwebata ndị ọrụ niile. Halk Ekmek, nke mụbara ọnụ ọgụgụ nke ndị na-egbochi ihe ma zigara ndị na-edenye ozi na ịdọ aka ná ntị na ebe mechiri emechi, mere ka ọ bụrụ iwu dị na ịme masks na uwe aka. Halk Ekmek, nke na-emechi ebe a na-ere kọfịkasị n’ebe a na-ere ahịa, malitere itinye iwu 1 mita maka nchebe nke anya na-elekọta mmadụ maka ahịa ngwaahịa kwa ụbọchị.
N'ịkọwapụta na ha butere ahụike ọha na nchekwa nchekwa nke ọha anya, Halk Ekmek General Manager Recep Mızrak kwupụtara na ha weere oke usoro:
“Anyị edoziwo ihe 23 dị iche iche. Anyị mepụtara Tektọ Ọsọ Nsogbu maka ntinye nke ngwa. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ mmepụta anyị na-arụ ọrụ ugboro atọ, anyị na-atụkwa ahụ ọkụ nke ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ na ngbanwe a n'oge ọrụ. N'ebe dị ọcha, anyị wetara mkpa ọgwụ dị, ọgwụ aka na nkpuchi. Anyị adọpụtala ahịrị edo edo na oge 3 iji chekwaa mmekọrịta mmadụ na Storelọ Ahịa Ahịa anyị. N'ụzọ dị otu a, anyị na-agba mbọ ichedo anya ndị obodo anyị na-abata. "
NKPUKWU amalitela na C-PLate SERVICE VEHICLES
N’igosi na ha okpukpu abụọ na-ehicha ma na-emebi ihe metụtara coronavirus site n’ụbọchị mbụ ka Ankara Obodo ukwu, Ngalaba Okwu Ahụ Ike Seyfettin Aslan kwuru na a na-edobe ụgbọ njem ọha n’usoro a kwa ụbọchị.
N'ikwu na ha na-emebi ugbo ala ndị ọrụ C plate mgbe ụgbọ ala Metro, ANKARAY, Cable Car, Buse na tagzi, Aslan kwuru, “Anyị na-aga n’ihu na nhicha na nsị na-arụ ọrụ n'ụgbọ njem ọhaneze niile eji eme ihe na 7/24. Anyị zutere Onye isi oche nke ftslọ ọrụ nka nke ndị ọrụ ụgbọ ala Ankara ma wulite etiti. Mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe ụgbọ ala ọrụ C plate anyị niile batara etiti ahụ, aga-ewe ihe ga na -eme ihe. Onye isi nke Transportgbọ njem ga-eweta ọrụ achikọ ọnụ na okwu a. Dịka Obodo ukwu, anyị na-anwa imezu mbọ anyị maka ahụ ike ndị mmadụ 7/24 ”. Onye isi ngalaba na-ahụ maka mbupu ụgbọelu nke Ankara Ali Cengiz Akkoyunlu gosipụtara na ụgbọ ala azụmaahịa na-arụ ọrụ na mpaghara nke Obodo ukwu na-aga n'ihu na-agha ụgha 7/24 wee sị, “Ngụkọta nke ụgbọ ala azụmahịa 10, gụnyere obere ụgbọ ala na tagzi ụgbọ ala, agbaala ọgwụ. Mgbe usoro a gbasara ihe dị ka puku asaa kwụrụ narị narị ụgbọ ala atọ, a ga-asachapụ puku ụgbọ ala azụmahịa dị puku iri na asaa. ”
Tuncay Yılmaz, Onye isi oche nke deslọ ahịa ndị ahịa nke Ankara Ọrụ Ọkwọ ụgbọala rụtụrụ aka na mkpa ọhụụ ọmụmụ mmerụ ahụ nke ndị isi obodo ukwu ahụ rụrụ ma kwuo, “Anyị nọ na ngalaba na-eburu ndị ọrụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ nkịtị na obodo mgbe niile n'ụtụtụ na mgbede. Tozọ iji kpochapụ ihe egwu a bụ disinfection na nhicha. N'echiche a, Obodo Ime Obodo nyere anyị 7/24. Ana m ekele gị nke ukwuu. ” Ọ bụ ezie na onye ọkwọ ụgbọ elu C İbrahim Aydirek kelere Onye Isi Obodo Mịnịstrị Mansur Yavaş, Fatih Yıldız kwuru, “Anyị ga-ekele ekele na Ankara Metropolitan Obodo maka ọrụ ya. Ọ bụ ọrụ nhicha ma fesa ya kwesịrị ịdị ”.
Na-ekele CHAIRMAN SITE TAXI NA AKW SHKWỌ ILLỌ EGO
Na-eje ozi n'okpuru Ngalaba Nchedo na Njikwa gburugburu, BELPLAS A.Ş. Ndị otu na-ehicha ihe na-aga n'ihu na -eme ihe na-agbapụ na tagzi na obere obere ụbọchị kwa ụbọchị, site na ntuzi aka nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş.
Ọ bụ ezie na ọrụ ndị a na-emerụ emerụ dị n'okpuru ndị otu ahụ na-ahụ maka ndị uwe ojii, Orhan Taşcı, onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu, kwuru, “Anyị na-ekele Onye Ọchịchị Obodo Ankara Obodo anyị maka nkwado ha. Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịrụ ọrụ na-ehicha ụgbọ ala anyị. Anyị na-eso ndị njem anyị ekerịta okwu a. Ndị njem anyị nwere ike iji ụgbọ ala udo nke obi anyị. ” Hasan Hakan Tağluk, Onye isi oche nke Board nke Esenboğa Taxis Motorized Carriers Cooperative, kwuru, "Anyị na-erite uru site na ngwa a site na nkwado nke Obodo anyị. Anyị na-enweta ezigbo nzaghachi banyere ọrụ n'aka ndị njem anyị. Anyị chọrọ ka ọmụmụ ndị a gaa n'ihu. Ọ ga-amasị anyị ịkele Mayor anyị Mansur Yavaş maka nkwado ha. ”
Rıfat Çetinkaya kwuru na ha na-eje ozi na nkwụsị Sincan Dolmuş wee kwuo, sị, “vehiclesgbọala anyị niile anaghị emebi. Ọ ga-amasị m ikele ndị obodo anyị na Maazị Mansur Yavaş maka ọrụ ha. ”Driversgbọala ndị obere ụgbọala nke ritere uru na ọrụ ahụ kwuru, sị:
Niyazi Bilgiç: “Ọ ga-amasị anyị ịkele Onye isi ala anyị Mansur Yavas maka ọrụ a nke obodo. Anyị na-atụ anya na ọrụ nke ọrụ a. ”
Feyzullah Kızıltaş: "Ana m ekele gị Nnukwu Obodo anyị maka ọrụ a."
Taburlu Onyinye “I meela obodo anyị maka ilebara okwu a anya. Anyị na-anọgide n'ozi anyị n'ụzọ dị mma. ”
ỌZỌ EGO NA-AK .ZI ANA
Obodo ukwu obodo ukwu, nke nọ na-arụ ọrụ na-adịghị ọcha site n'ọtụtụ ebe site na ụlọ ọrụ ọha na gọọmentị gaa na ndị na-abụghị ndị gọọmentị, emeela usoro ndị ọzọ na-emegide ihe ize ndụ ọrịa a:
Ugwu a na-akpọ "Local Brigade Exams" nke ndị isi obodo ukwu mara ọkwa na 30 Machị na ekwuputara na a ga-anakwere akwụkwọ anamachọihe ahụ ma a ga-eme ya n’agbata 13-17 Eprel, ka etinyerịrị ya na ụbọchị ọzọ.
N'ihi mbelata nke ọnụ ọgụgụ ndị njem nke ndị azụmaahịa na-eji ụgbọ ala nkịtị (ÖHO) na ndị nkịtị Vehicles (ELV) na-arụ ọrụ na Ankara, ikikere na-aga n'ihu na ọnụ ahịa ahịrị oge egbuola oge ọnwa abụọ.
Ruo 4 Mach 23, karalọ Ankara Metropolitan Municipality, ebe puku mmadụ anọ, ndị ọzọ na-abụghị ikike nchịkwa, jere otu ọrụ na EGO na ụlọ ụlọ ọrụ ASK,, n'ime oke nke usoro e mere megide ọrịa coronavirus yana na General Directorate nke Obodo ukwu nke Obodo ukwu, EGO na ASKI iji chebe ahụike nke ndị ọrụ. ga - arụ ọrụ na usoro mgbanwe ruo na nke abụọ iji hụ na arụzuru ọrụ ọha na eze n'enweghị nsogbu ọ bụla.
A ga-eme ngwa ọhụrụ enyemaka ndị ọrụ na ime obodo site na ekwentị kọntaktị ọnụ ((0312) 322 45 47, (0312) 322 11 33 na (0312) 507 37 00)) kama thelọ Ọrụ Enyemaka Ihe Oriri iji gbochie igwe mmadụ ịmalite na ịgbasa nje ahụ.
Job Postage: TÜVASAŞ Ọrụ Mgbasa Ozi Maka Ọgụ Iguzogide Iyi ọha egwu
Snow kpuchiri okporo ụzọ, ndị na-ere ahịa na-anọ na klas megide snow
Ngwaọrụ ndị a pụrụ iji rụọ ọgụ na-alụso Snow
Nwelite na Mwakpo na Kayseri-Sivas-Kars Railway Route
Oge egwu na-eme ka snow dị na Izmir
IMM 17 mere uzo puru iche maka uzo ozo na September
Nsacha Coronavirus na Kocaeli Intercity Bus Terminal